Abavelisi beeNdebe zePET -Ifektri yeekomityi zePET kunye nababoneleli
Iindebe zeCOPAK'S PET zihambelana ne-100% kwinqanaba lokutya. Zonke iinkqubo zemveliso zigqityiwe kumasifundisane ococekileyo ongenothuli. Kwaye ikopak ipasile isiqinisekiso se-FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001.
Indebe yeCOPAK-PET inenkangeleko entle, ukuhlala ixesha elide, ikhuselekile ekusebenziseni, isempilweni kwinqanaba lokutya. I-100% ye-BPA isimahla kwaye ayinetyhefu. Indebe yethu ye-PET inomtsalane kubantu abancinci nakwabadala ngenxa yendlela abajonga ngayo.
1.Umbala: I-Crystal-clear or colorful color
Ukusetyenziswa: Iziselo ezibandayo, Isiselo, ikofu yomkhenkce, iismoothies, ibhabhu / iti yeBoba, ubisi, i-cocktails efriziwe, amanzi, iisoda kunye neejusi.
8. Umthamo: 12Oz nge-375ml, 340ml okanye i-350ml
Indebe yePlastiki yePlastiki eneZiciko
Umzi-mveliso weChang COPAK Co., LTD yinkampani yobungcali yeebhotile zePET kunye nendebe yePET eChina. Kwi-PET CUPS, esinayo Indebe yeplastiki ye-PET eneziciko okanye ngaphandle kweziciko.
Ngokubhekisele kwiikomityi ze-PET, sine-5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 12oz, 13oz, 14oz, 15oz, 16oz, 20oz, 24oz njalo. Ububanzi obuphezulu buyahluka ukusuka kwi-74mm ukuya kwi-98mm. Sixelele nje ubungakanani kunye namandla owadingayo, siya kukucebisa ngendebe ye-PET elungileyo.
Ngokubhekisele kwiziciko, esona siciko sithandwayo sisiciko se-DOME kunye nesiciko seLID. Sinesivalo esivulekileyo esisiqingatha, isiciko esingaphantsi kwengca, isiciko sebhere kunye nokunye. Khawusibonise oyifunayo. Ixabiso linokucatshulwa kunye neekomityi zeplastiki zePET.
Umphetho wethu wePET PLASTIC CUP uqengqiwe. Umlomo ke ugudile. Kukhuselekile kakhulu ukusela. Zonke ezineziciko ziyilelwe ngokobubanzi be-PET CUP TOP kunye nomlomo.Zidibana ngokuchanekileyo kwaye oku akuqinisekisi ukuvuza kwendebe yethu yeplastiki ye-PET.
12oz indebe yeplastiki
Material: Pla kunye nezinto PET
Umqulu: 12oz indebe yeplastiki 340ml / 350ml okanye 375ml
I-logo: I-COPAK okanye ilogo eyenziweyo eyamkelekileyo
Uyilo: I-OEM / i-ODM
Ixesha lokuhlawula: T / T; L / C; umanyano wasentshona
16oz indebe yeplastiki
Ikomityi yeplastiki ethandwa kakhulu ye-16oz yeCopak yeyokwesixhobo sePET. Umthamo kunye neenkcukacha zesayizi zezi zilandelayo.
32oz PET indebe
Ubukhulu: 11.5 * 6.5 * 17.6 / 11.5 * 6.3 * 17.8cm
Umthamo: 32oz, 1000ml
Umbala: umbala ocacileyo okanye owenziwe ngokwezifiso
Ilogo: logo ngentando eyamkelekileyo
Ixesha lokuzisa: kuxhomekeke kwimfuno zakho kunye nobungakanani.
Izatifikethi: ISO9001, BRC, FDA, LFGB, QS
Iinkcukacha zethu 30oz PET indebe ingezantsi,
KwiCopak, 92Iikomityi ze-PET ze-PET zisayinwe kwimiqulu eyahlukeneyo. I-5oz ene-200ml, i-7oz nge-200ml, i-8oz nge-280ml, i-9oz nge-275ml, i-12oz nge-375ml kunye ne-12oz ene-340ml, i-14oz nge-460ml, i-16oz ene-580ml zonke ziyilelwe ubukhulu obungama-98mm. Kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kule miqulu kunye nobubanzi, unokufumana ubungakanani kunye nevolumu kwiCOPAK.
95mm indebe ye-PET
Indebe ye-95mm ye-PET iyafumaneka ngevolumu ye-8.5oz, 10oz, 12oz, 13oz, 16oz, kunye ne-24oz. COPAK'S95Iikomityi ze-PET ze-PET ziyilelwe ukulingana nasiphi na isiciko sedayimitha engama-92mm ke ukuba ujonga iikomityi zeplastiki ezineziciko ke ikopak ikwanoluhlu lwezinto onokukhetha kuzo ngokusekwe kwiimfuno zakho. Khetha kumgca weflethi, idome, okanye i-strawless! Ukuguquguquka kokhetho lwesiciko kunye95mm PET indebe Unceda ukugcina uluhlu lwezinto ezenza ukuba lube longezo olukhulu kwisitokhwe sakho sokubonelela.
Uyilo lwethu oluyingqayizivele, lwendebe yesiko "I-COPAK" ilungele nayiphi na iti ebandayo, isiselo seziqhamo, ubisi, ubisi, ikofu kunye nesmoothie. Ushicilelo lwe "Good Times" luyi-360-macala onke kwaye lukhanyise usuku lwakho ngeentyatyambo ezinesandi esihle kwi 95mm I-PET indebe. Kukulungele ukuwa, okanye naliphi na ixesha lonyaka! Enye yeekomityi zethu ezithandwa kakhulu.
Iikomityi ze-PET ze-98MM
COPAK'S Iikomityi ze-PET ezingama-98mm zenzelwe ukuba zilingane nasiphi na isiciko sedayimitha engama-98mm ke ukuba ujonga iikomityi zeplastiki ezineziciko ke ikopak ikwanoluhlu lwezinto onokukhetha kuzo ngokusekwe kwiimfuno zakho. Khetha kumgca weflethi, idome, okanye i-strawless! Ukuguquguquka kokhetho lwesiciko kunyeI-98mm PET indebe Unceda ukugcina uluhlu lwezinto ezenza ukuba lube longezo olukhulu kwisitokhwe sakho sokubonelela.
KwiCopak, Iikomityi ze-PET ezingama-98mm zisayinwe kwimiqulu eyahlukeneyo. I-12oz ene-360ml, i-14oz nge-400ml, i-16oz nge-500ml, i-20oz nge-610ml, i-24oz nge-690ml kunye ne-700ml zonke ziyilelwe ubukhulu obungama-98mm. Kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kule miqulu kunye nobubanzi, unokufumana ubungakanani kunye nevolumu kwiCOPAK.
I-BPA yeNdebe yeplastiki yasimahla
I-Bisphenol A (BPA) sisixhobo esenziwe ngezinto eziphilayo kunye nefomula yeekhemikhali (CH3) 2C (C6H4OH) 2 ekwiqela leziphumo ze-diphenylmethane kunye ne-bisphenols, enamaqela amabini e-hydroxyphenyl. Isiqina esingenambala esinyibilikayo kwizinyibilikisi eziphilayo, kodwa asinyibiliki ncam emanzini (0.344 wt% kuma-83 ° C).
I-China PET yeNdebe
Ishishini leShanghai Copak Co., LTD libonelela ngempilo efanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu weemveliso zokupakisha ezifikelelekayo kunye neenkonzo zeshishini lokutya, ivenkile yekofu yohlobo, ivenkile yobisi yeti, indlu yedessert, ihotele yeenkwenkwezi, iofisi yeshishini, elona khaya liphezulu.
Ezona mveliso ziphambili zeCOPAK ziibhotile zaseChina,I-China PET indebe, Izikhongozeli zePET, itreyi yePET. Iimveliso zethu zisetyenziselwa ukutya, isiselo, iziqhamo, izixhobo zekhompyutha, into yokudlala, umsebenzi wezandla, izinto zokuthambisa, isipho, amayeza, imveliso esempilweni, imfuneko yemihla ngemihla kunye nokupakisha izinto zokubhala Ungafumana nantoni na oyifunayo kwinkampani yethu.
Umenzi weNdebe yePET yaseTshayina
IShanghai COPAK, eyaziwa njenge I-china PET indebe yomenzi, yasekwa ngo-2010. Iikomityi zePET zeCOPAK zaziwa ngokuqina kwayo kunye nokukwazi kwayo ukugcina incasa yemveliso, ukubonakala kwayo kunye nokubonakala kwayo. Lukhetho oluhle kakhulu apho ukucaca kwendebe kuphucula ukubonakala kwemixholo yayo.
Iikomityi zethu ze-PET zisetyenziselwa i-smoothies, iijusi, ii-coffees ezinomkhenkce, ukungcangcazela kwezempilo, iidizethi, imixube yeziqhamo kunye ne-iziqhamo, i-confectionery, umkhenkce ococekileyo, iziselo ezibandayo kunye neziselo ezinxilisayo.